Cheedị banyere Nkwalite Nkwalite Mmepụta na Nkesa Nkesa yana Nnukwu Mmetụta na SNP na Magellan SDNO | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » News » Cheedị echiche Nkwukọrịta na-eweta Mmepụta na Nkesa Nkesa nwere Nnukwu Mmetụta na SNP na Magellan SDNO
Cheedị echiche Nkwukọrịta na-eweta Mmepụta na Nkesa Nkesa nwere Nnukwu Mmetụta na SNP na Magellan SDNO
Nhazi ụlọ ọrụ na-achịkwa njikwa na njikwa na-agbakwunye ọrụ iji melite arụmọrụ IP
TORONTO, Eprel 29, 2021 - Na nkwado nke mgbanwe ahịa chọrọ, Kere Communications agbakwụnyela ọtụtụ ọrụ ọhụụ na nkewa ya zuru ụwa ọnụ Selenio ™ Network Processor (SNP) ikpo okwu na Magellan ™ SDNO Control Sistemụ. Njirimara sọftụwia ọhụrụ a na - eme ka itinye ego nke ndị ahịa dị ugbu a, na-akwalite arụmọrụ ọzọ na nrụpụta, oghere na nkesa ụlọ. Nwelite SNP na-emekwa ka usoro ikikere ikikere na-arụ ọrụ, na-enye ndị ọrụ ohere ịghọta otu uru dị mkpa nke ngwanrọ dị ọcha: ikike ịkwụ ụgwọ naanị arụmọrụ achọrọ maka arụmọrụ ọrụ ha.
Kere si SNP nweela nnabata ngwa ngwa n’ahịa gafee sistemụ IP na SDI, yana atụmatụ vidiyo 32,000 na ọwa vidiyo 500,000 nke SNP na-arụ ọrụ ugbu a gburugburu ụwa. Ọtụtụ n'ime ndokwa ndị a gụnyere Magellan SDNO akara sistemụ, na-etinye sistemu SDI na IP n'ime njikwa njikwa jikọtara ọnụ - ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi ụwa iji chekwaa ntinye ego nke ihe nketa ma nyefee mgbanwe na IP.
John Mailhot, “CTO Networking and Infrastructure” kwuru na "Ọganiihu nke SNP bụ n'ihi na anyị gere ntị nke ọma n'ihe ndị mgbasa ozi na-agwa anyị na ha chọrọ na ntọala nrụpụta ha." Kere Communications. “Anyị rụsiri ọrụ ike iji nweta ngwaahịa kwesịrị ekwesị na SNP oge kwesịrị ekwesị. Ọ na-ewukwasị na usoro nhazi usoro ihe eji eme ihe, mana na-enweghị screwdriver. Ihe ngwaike SNP bụ ihe enwere ike ịhazigharị ya, yabụ anyị nwere ike itinye ọrụ ọhụụ site na ịpịnye ngwanrọ ngwanrọ wee wepụta ya ọsịsọ niile n'ụwa - ọkachasị ndị ahịa dị ugbu a. ”
SNP bụ 1RU, netwọkụ jikọtara na ntanetị nwere ihe ntanetị anọ nwere onwe ha, nke ọ bụla nwere ike ịnabata mmadụ nke akọwapụtara na ngwanrọ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ usoro mgbasa ozi na-agagharị na mmejuputa ngwanrọ zuru ezu, SNP na-enye ohere pụrụ iche na ike na-arụ ọrụ nke ọma maka ọrụ nhazi mgbama nkịtị - belata ike oriri maka ngwa ndị a karịa 50%.
Mbupu ọrụ SNP taa gụnyere ngakọrịta, ntụgharị SDI / IP, nhazi agba na ntụgharị, gụnyere HDR, ntụgharị vidiyo ntụgharị vidiyo (SD /HD/ UHD), na mmeputa ihe otutu. N'iji ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri (SNP-MV), ihe nhazi ọ bụla na-ejikwa akara itoolu na otu UHD abụọ ma ọ bụ abụọ, na-ebuwanye ibu na PIP 36, na ntinye ST 2110-20 na ntinye. SNP-MV na-akwado isi mmalite HDR na ngosipụta HDR na ntụgharị na usoro a na-ahụkarị, na-asụgharị ka achọrọ n'etiti HLG, PQ, Slog3, na SDR ọdịnala. Ọhụrụ software na-enyere rotated “Eserese” ndapụta maka multiviewer ngwa na-eji vetikal ngosipụta.
Iji kwekọọ gbaa ndụ na eserese eserese eserese, ihe ntụgharị nke SNP na-akwadozi 3D CUBE LUTs nke onye ọrụ iji nye njikwa zuru oke na nhazi agba na ntụgharị HDR. Sọftụwia ọhụrụ ahụ na - ewepụtakwa ọnụego etiti (23.98, 24, 25 na 29.97) maka UHD na 1080p, ma gbakwunye nkwado maka akara ngosi 8K.
Industrylọ ọrụ ịkparịta ụka n'IPntanet IP na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ mmiri 400GBE na isi ihe ngbanwe na nsụgharị SNP kachasị ọhụrụ gụnyere nkwado maka DR / FR ụdị 100G QSFPs. Nkà na ụzụ ọhụrụ a na-enye ohere njikọ dị mma nke nkeji SNP anọ na otu netwọk 400G na-ebugharị site na ngwa anya kwụ ọtọ, na-enye oke njupụta usoro. 100G na 400G optics maka eriri fiber ogologo na-aghọwanye ihe a na-ahụkarị ma na-abawanye uru, na-agbatị iru nke "ogige" gafere iri puku kilomita.
Ntọhapụ sọftụwia ọzọ maka SNP ga-agbakwunye ndị ọrụ nhazi maka mkpakọ JPEG XS; a na-atụ anya ka usoro onyinye a dị oke elu, usoro adịghị ala ga-agbanwe ọ bụghị naanị ntinye na sekit mgbagha, mana ọ ga-enyekwa ụzọ dị irè ma dị irè iji nyefee ọdịnaya adịchaghị na ya site na igwe ojii - linchpin nke ịkwaga n'igwe ojii nwere ike ịrụ ọrụ maka nnukwu -ime emepụta.
"Formdị ihe pụrụ iche nke SNP pụtara na anyị nwere ike ịnye ọrụ a niile na ịdị irè na ọnụ ahịa dị ịrịba ama," Mailhot gara n'ihu. "Usoro ikikere-isi anyị na-enye ndị ahịa ohere ịwụnye ngwaike otu oge, zụta naanị ihe ndị ha chọrọ iji rụọ ọrụ ahụ, ma gbakwunye ọrụ mgbe e mesịrị ka mkpa dị iche iche."
Na njikwa n'ihu, ọhụụ Magellan SDNO kachasị na-ewuli elu na usoro AMWA NMOS a ma ama nke ewepụtara na SDNO n'afọ gara aga. Cheedị na-eji NMOS ugbu a n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntinye ọrụ ọ bụla iji jikọta njedebe ST 2110 site n'aka ndị na-ere ahịa ndị ọzọ, na-enyere ndị ahịa aka iwulite usoro kachasị mma nke na-eme ka igwefoto, ndị na-agbanwe agbanwe, ụda, na teknụzụ egwuregwu ndị otu egwuregwu ha na-ahọrọ.
Ihe ngosi SDNO ohuru a na - agbatị ngwa ngwa Live Manager - PathView na AlarmView - na - enye nghọta dị omimi na mmekọrịta ya na usoro mgbasa ozi nke netwọkụ. LM-PathView na-enye ngosipụta ụzọ mgbaama dị egwu maka gburugburu SDI na IP, na-enye ndị ọrụ ohere ịdọrọ na dobe isi mmalite na ebe aga na akwaa ihu anya, na Magellan jiri eserese mezue ụzọ mgbaàmà niile gụnyere ụzọ ezi uche dị na ihe ngosi ma gosipụta ọtụtụ nhọrọ. larịị n'ókè na ala.
Netwọk IP na-eme ka owuwu nke nnukwu ụlọ ọrụ nwere nnukwu ọdụ data na-adọkpụ. Ihe ngosi SDNO kachasị ọhụrụ gụnyere mmelite ndị dị mkpa na salvo, ndebiri, yana ndị ndezi nchekwa data, ime ka mgbakwunye na-agbakwunye, na-achọ ma na-edezi nchekwa data ahụ. Ọ bụ ezie na atụmatụ ndị na-abụghị igbochi bụ ihe mgbaru ọsọ, n'oge na-adịbeghị anya Magellan SDNO gosipụtara nkwado njikwa bandwidth maka topologies / akwukwo akwukwo, na-akwado ma netwọ Arista na Cisco - na-enyere usoro ọrụ aka ọbụlagodi enwere ike igbochi topologies.
A na-ewepụta sọftụwia ọhụrụ a n'ụzọ zuru oke ma dị maka ndị ahịa na ndị ahịa ọhụrụ. Enwere nrụnye SNP dị ugbu a na ngwanrọ nwere ike kwalite ya na ngwanrọ ọhụụ n'oge mmezi nhazi.
Maka ozi ọzọ banyere Kere Communications'ngwaahịa na ngwọta, biko gaa na www.imaginecommunications.com
Kere Communications na-enye ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ntụrụndụ ike site na mgbanwe ọhụrụ. Ndị mgbasa ozi, netwọk, ndị na-enye vidiyo na ụlọ ọrụ dị gburugburu ụwa na-adabere na ntinye anya anyị, ọdịnihu, video multiscreen na ego ntinye aka iji nweta ngwọta kwa ụbọchị iji kwado ọrụ ha dị egwu. Taa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke vidiyo vidio nke ụwa na-agagharị ngwaahịa anyị, ngwọta ngwanrọ anyị na-emechikwa otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mgbasa ozi mgbasaozi ụwa. Site na mmeghari ohuru na-aga n'ihu, anyị na-ebute IP dị elu, igwe ojii-enyere, ngwanrọ na-akọwapụta ngwanrọ na ngwọta arụ ọrụ na ụlọ ọrụ. Gaa www.imaginecommunications.com maka ozi ndị ọzọ, ma soro anyị na Twitter @imagine_comms.
nkesa ike Kere Communications ip Netwọk IP John Mailhot isi uru Magellan Mmekọrịta MKM MKM Marketing Communications arụmọrụ ọhụrụ ihe ngosi SDNO Ihe Nlekọta Ihe Njikọ nke Selenio SNP Azụmahịa 2021-04-29
Previous: DPA na-enye isi mmalite ederede maka ọba akwụkwọ ụda dị elu
Osote: Invictus Entertainment Na-eme Ka Ọnọdụ Ahụhụ Dị Mkpa Na Live Special Specials Iji AJA KUMO 1616-12G